UVeer P. Patel, u-Esq. - NJ & NY Real Estate, Probate, Ukuvalwa yezokuVikela Ukuqothuka Abameli
Ikhaya / Amalungu Ethimba/ UVeer P. Patel, u-Esq.
New Jersey - Ukuphatha uzakwethu
[Email protected]	Ucingo: 844-533-3367 Ext. I-12
Okwenza ngibe nguMmeli Wezokuvikela Okusobala okugxile ekusindiseni Amakhaya Abantu:
Kusukela kusungulwa inkampani yezomthetho eJersey City, Bengisebenza njengoMmeli Wezokuvikela Okusobala ekusizeni imindeni ukulungisa noma ukunciphisa imithwalo yayo ezindaweni eziqinile ezihlobene kakhulu neNW Home Foreclosed. Nsuku zonke, ngiba Ummeli Wezokuvikela Okumele, onikeza izinketho eziningi nezeluleko ezingcono kumakhasimende ami kuwo Ukuvezwa Kwentela Ye-NJ yentela futhi Ukubikezelwa Kwempahla YaseNW, futhi angikwazanga ukujabula ngeningi ngomsebenzi wami. Ngibe nenhlanhla enkulu nodumo lokuba nabalingani abahle kakhulu abangincoma ngezifiso zabo nasezindaweni abazisebenzelayo futhi lokhu kusho imiphumela engcono nezinsizakusebenza eziningi zamakhasimende ethu. Izikhathi ezizuzisa kakhulu ukubona umthelela enginawo kuyo yonke imindeni, nokuthi umphumela womsebenzi wami uholela kanjani empilweni ehluke ngokuphelele kwabaningi.
Uthando lwami ngomthetho lwaqala ekolishi eRutger futhi lwaqala kusukela ekuqaleni. Uyabona, angizange ngibe nesikole somthetho kumakhadi ami. Inhloso yami yokuqala bekuwukuya ekolishi lomphakathi bese ngidlulisela eyunivesithi yeminyaka emine. Kungenzeka, ube ngumfundisi. Bengingazi ukuthi iYunivesithi ibukeka kanjani, noma ukuthi imfundo ephakeme isho ukuthini ngempela. Kwakungibonga ukwesekwa ngumzala okhethekile owangiphoqa ukuthi ngibhekisise amaRutger. Ngithole ukwamukelwa ngeSikhwama Somathuba Wemfundo - Uhlelo lwe-EOF (uhlelo olwenzelwe ukunika labo abaphakathi kwethu abanezizinda ezinzima ukuthi batsholwe emfundweni ephakeme). Okwamanje lapho ngihamba ngiyongena ekhampasi, kwakungathi isibani segesi sicishiwe.
Ukudalulwa, Ukuqothuka, Ukulahlekelwa Ukulahleka, Ukuthengisa izindlu, kanye Nezindaba Ze-Chancery.
Ukuthi ngaphenduka kanjani kuMmeli Wezokuvikela Omkhulu waseNew York
Ngisizile ekutholeni ubudlelwane nabanye, ngaba ngumongameli kahulumeni omncane wabafundi emlandweni wezikole zakwaRutger, ngahlala emakomitini nabezomthetho boMbuso. Ngaze ngabhalela nezinkulumo I-Cory Booker (leyo ndaba ehlukile!), unikeze ikheli eliqinisekisiwe lekilasi lami eliphothule iziqu (bheka lapha: https://www.youtube.com/watch?v=4qBdz7oBd7Q), nokufeza kwami ​​okukhulu… Ngithole umkami wakusasa esigabeni se-phycology social. (Manje sinengane yethu yokuqala isesendleleni.)
Ngesikhathi sami eRutger, ngabhekana nenguquko, futhi ngaqala ukucabanga okukhulu! Bengifuna ukufunda ngabaholi bamalungelo abantu, hhayi lapha e-United States kuphela kodwa nakwamanye amazwe - lokhu yikhona okuholela ekuthandeni kwami ​​umthetho, ikakhulukazi njengoMmeli Wezokuvikela Okusobala osindisa amakhaya abantu. Ngafaka isicelo sesikole sezomthetho futhi ngaqala e2009. Esikoleni, ngaqala ukukhomba ukungalungi kwezenhlalo engikuqaphelile lapha nalaphaya, futhi ngokuhamba kwesikhathi. Khumbula ukuthi bengifunda esikoleni somthetho ngemuva kokudonswa kwemali enkulu, ngibuka izigidigidi zihamba ziye emabhange amakhulu ngaphandle kosizo lwezigidi zabantu baseMelika abasebenza kanzima abalahlekelwe yimizi yabo ukuguqulwa. Ukuphethwa kwazo zonke lezi zinto kuholela entshisakalweni yami yomthetho wokumbulwa kwemvelo, ukusebenzela imindeni, hhayi amabhange.
Lapho ngithola ithuba, ngakhuluma nami Derek noLazaro futhi sasungula le nkampani ndawonye. Inhloso ibilula, sebenzela abantu ezindaweni eziqinile, futhi bazenzele indlela yokuziphilisa. Selokhu kwasungulwa, asikaze sibheke emuva. Kuyangijabulisa ukuthi minyaka yonke siyaqhubeka nokukhula, futhi njalo ngonyaka sisiza kakhulu kunesokugcina. Ngomlingani wethu omusha uJason Bost, umsebenzi wethu manje useBrooklyn New York. Lapho abangane bami bengibuza ukuthi ngenzani, ngiyaziqhenya. Ngisiza abantu - ayikho indlela engcono yokusebenza.